फिर्ता दुखाइ को प्रभावकारी माध्यम (ट्याब्लेट)
फिर्ता दुखाइ को सही कारण निर्धारण गर्न सधैं गाह्रो। मांसपेशीमा र मेरुदण्ड वरिपरि संयोजी ऊतक को हड्डी नेटवर्क यसलाई आफ्नै कारण निर्धारण गर्न गाह्रो छ, यस्तो जटिल संयन्त्र छ।
चिकित्सा, त्यहाँ गठन परिणाम धेरै रोगहरु छन् फिर्ता दुखाइ को। यस्तो लक्षण दुई प्रकारका छन्:
गंभीर दुखाइ को प्रकटीकरण मा व्यक्त गरिएको छ जो द्वीप, अक्सर यो अचानक, उदाहरणका लागि, चोट पछि हुन्छ;
व्यक्त पुरानो लामो समयसम्म उच्चारण लक्षण बिना रोग को पाठ्यक्रम समय को एक निश्चित अवधि पछि उत्पन्न वा चोट को एक परिणाम हुन सक्छ।
यी प्रकारका प्रत्येक यो अनुरूप ट्याब्लेटको चयन गर्न सम्भव छ, जो आधारित खुलारूपमा विभिन्न डिग्री छ backache देखि (कम फिर्ता, मेरुदण्ड, आदि)।
सबै भन्दा साधारण कारण, अप्रिय अनुभूति र बेचैनी परिणाम गर्न सक्छन् जो विचार।
भारी वस्तुहरु भारोत्तोलन
भारी वस्तुहरु भारोत्तोलन को मेरुदण्ड मा एक ठूलो लोड दिन्छ। यस्तो आन्दोलनहरु क्रमबद्घ हो भने, यो पुरानो फारम सक्छ। त्यहाँ गम्भीर क्षति को एक जोखिम छ रूपमा सामान्यतया भारी वस्तुहरु, एकदमै होसियार हुनु आवश्यक छ। तपाईं अचानक आन्दोलनहरु जोगिन प्रयास गर्नुहोस् वा फर्काउँछन् पर्छ। तथापि, तपाईं जोगिन भने यो थिएन र दुखेको फिर्ता, जो ट्याब्लेटको बोधो विस्तार गर्ने लिइएको गर्न सकिन्छ? सबै भन्दा साधारण दबाइ - "Diclofenac"। यो मात्र पीडादायी ऐंठन त्यहाँ मेरुदण्ड चोट को एक खतरा छ रूपमा जो, धेरै महत्वपूर्ण छ, विरोधी-भडकाऊ गुण छ पनि relieves, तर। पनि प्रभावकारी पर्याप्त "Movalis", "Nurofen"।
तथापि, हामी सम्म सकेसम्म सही मुद्रा कायम गर्न पर्छ र एड्स प्रयोग गर्न, तपाईँले सार्न वा कामबाट भारी वस्तुहरु उचाल्न छ भने, कि, लगभग सधैं छ कि सम्झना गर्नुपर्छ। यसलाई विशेष अंगवस्त्र, बेल्ट, आदि हुन सक्छ, तिनीहरूले तपाईंको पछाडि सजिलो तनाव विस्तार गर्ने डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
मुद्रा मा समस्या
प्रायजसो मा मेरुदण्ड को झुकाव फिर्ता दुखाइ गर्न जान्छ। यो रोग को प्रारम्भिक चरण मुद्रा को एक बाधा छ। यस्तो अप्रिय परिणाम यो बस्न वा सीधा आफ्नो फिर्ता संग खडा गर्न, आफ्नो टाउको उच्च राख्न आवश्यक छ जोगिन, सकेसम्म धेरै उनको काँध सोझो। सीधा मुद्रा को मेरुदण्ड aligns र घाँटी समर्थन प्रदान गर्दछ।
अक्सर, रोग को पहिलो लक्षण प्रारम्भिक बाल्यकाल मा, समय देखि बच्चा स्कूल सुरु गर्दा विकास। हामी कक्षा समयमा नियमित विश्रामहरू लिन आवश्यकता रूपमा साथै, सीधा सकेसम्म लामो समयसम्म आफ्नो फिर्ता राख्न stooping, जहाँसम्म सकेसम्म जोगिन प्रयास गर्नुपर्छ।
सामान्यतया, समस्या फिर्ता एक किशोरी दुखाइ सँगसँगै हुन सक्छ। त्यसपछि दबाइ संग संयोजन मा भौतिक चिकित्सा नियुक्त। Painkillers फिर्ता दुखाइ लागि खुला सार्न अनुमति दिने, spasms relieves। सबै भन्दा साधारण को हो nonsteroidal विरोधी-भडकाऊ दबाइहरु। आफ्नो मुख्य कार्य - को भडकाऊ प्रक्रिया, अप्रिय sensations सँगसँगै छ जो हटाउन। यस्तो अवस्थामा, डाक्टर "ibuprofen" prescribes। यो स्पष्ट निर्देशन अनुसार लागू हुनुपर्छ।
तपाईं उदाहरण, "Analgin" लागि, कमजोर औषधी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो "कुनै-shpoy" वा "papaverine" संग संयोजन मा निर्धारित छ। हाल लागूपदार्थ गंभीर मांसपेशी spasms राहत र analgesic को भडकाऊ प्रक्रिया रोक्छ।
व्यायाम प्रदर्शन स्वास्थ्य को लागि राम्रो छ, तर यो अक्सर चोट को एक जोखिम वहन। दुखाइ फिर्ता मा, दुर्भाग्य, व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई र एमेच्योर बीच एक साधारण रोग हो। विशेष यस्तो स्किइङ, रूपमा खेल मा खेलाडीहरूलाई प्रस्ट भारोत्तोलन र साइक्लिङ। यो चोट प्रतियोगिता मा सहभागिता jeopardize सकेन। त्यसैले, धेरै खेलाडीहरूलाई बलियो लिन painkillers फिर्ता दुखाइ (Tramadol वा hydrocodone को ट्याब्लेटको) को लागि। नियम, तिनीहरू (लगभग सबै) एक narcotic analgesic छन्। त्यहाँ निर्भरता बढाउनका राम्रो मौका छ जस्ता औषधि को स्वीकृति डाक्टर को नजिक पर्यवेक्षण अन्तर्गत आयोजित गर्नुपर्छ। जटिल विधि nanodiamonds उपयोग गरदै संग चक्की जोडती, र मा बलियो कि - - "Metandon", "Morphine", "Fentanin" संग कमजोर दुखाइ अक्सर "Codeine", "Propoxyphene", मध्यम संग निर्धारित छ।
पतन एक फिर्ता चोट को एक महत्वपूर्ण जोखिम ल्याउँछ, र गम्भीर परिणाम हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश, यो सधैं सम्भव रोक्न। तपाईं भुइँमा गिरावट यदि मेरुदण्ड गर्न क्षति को एक ठूलो सम्भावना छ। तपाईं आफ्नै आधारभूत सुरक्षा पालन गर्नुपर्छ। तर, यो पहिले नै देखा परेको छ भने, तपाईं दुखाइ ट्याब्लेट पछाडि मा लाग्न सक्छ। आदर्श "विश्वास।" उहाँले, भडकाऊ बाथ र degenerative प्रभाव गर्न विरोध छ। पनि "Voltaren" धेरै प्रभावकारी दुखाइ राहत, एक सामान्य जीवन नेतृत्व गर्न अनुमति दिन्छ। दबाइ को सक्रिय संघटक diclofenac सोडियम छ। यो prostaglandins को biosynthesis सबैभन्दा सक्रिय ब्रेक लगान मानिन्छ। र यो, बारी मा, सुनिंनु, गंभीर दुखाइ र पनि एक सम्भव ज्वरो रोक्न।
धेरै सक्रिय जीवन शैली पछाडि तनाव निम्त्याउन सक्छ। यस्तो भार क्रसिंग (disassembly, विधानसभा र उठाने फर्नीचर) मा सम्भव छ। यस्तो जम्पिङ, वा हालने रूपमा दोहराए कार्यहरू समावेश जो खेल मा अत्यधिक तनाव। सामान्य अवस्थामा सुविधा गर्न, तपाईं मेरुदण्ड फिर्ता दुखाइ देखि ट्याब्लेट लिन सक्छ, कम फिर्ता। यो गैर-steroidal लागूपदार्थ मा विकल्प बन्द गर्न सिफारिस गरिएको छ, यो मनमोहक छैन धेरै बलियो छ। Oddly पर्याप्त, तर overvoltage प्रभावकारी सजिलो एस्पिरिन मद्दत गर्न सक्छ। विरोधी भडकाऊ र analgesic: उहाँले आवश्यक गुण छ। वैकल्पिक उपचार "Tsitramon" "Indomethacin", "askofen", "Hlotazol" र अरूलाई जस्तै पाटी बन्न सक्छ।
महिला फिर्ता विशेष गरी अन्तिम चरणमा, गर्भावस्था को समयमा दुखाइ अनुभव। त्यहाँ सामान्य अवस्था राहत धेरै तरिका छन्। केही महिला यो उपयोगी योग वा पौडी अभ्यास गर्न पाउन। गर्मी पैक र गरम टब पनि फिर्ता गर्भावस्था को समयमा दुखाइ soothe। तथापि, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ र फिर्ता दुखाइ चक्की वा बरु बी भिटामिन देखि लिन तिनीहरू प्रभावकारी, को तंत्रिका जरा संग सुनिंनु कम मांसपेशी innervation पत्र र ऊतक चयापचय सुधार। वैकल्पिक - मुख्य दबाइ "cyanocobalamin" (बी 12), र B1 र B6 छ। सबैभन्दा साझा गर्भवती महिला तोकिएको जुन, - "Combilipen" र "Milgamma"।
अतिरिक्त वजन मेरुदण्ड घटेका मांसपेशीमा थप तनाव राख्दछ, र त्यहाँ फिर्ता दुखाइ विकास को एक उच्च जोखिम छ। निस्सन्देह, तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्न बाहिर बारी छैन रोगी ती अतिरिक्त बोसो ठूलो गुमाउनु छैन रूपमा। त्यतिन्जेल, तपाईं पछाडि दुखाइ चक्की देखि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मोटे मान्छे जस्तै गठिया, जोडहरुको, गाउट को सुनिंनु रूपमा धेरै रोगहरु, छ गर्छन, त्यसैले यसलाई ले-हुनुको "Dikloberl" सुविधा सिफारिस गरिएको छ। यसलाई पूर्ण सुनिंनु र दुखाइ हटाउँछ। तर, यो दबाइ पक्ष-प्रभाव, जो बीच छ:
गंभीर टाउको दुखाइ;
कमजोरी र चेतना को हानि;
पाचन पर्चा को विकार।
तसर्थ, यसको गर्न सकिन्छ मात्र निर्धारण मा।
को मेरुदण्ड मुख्य रोगहरु
फिर्ता दुखाइ कहिले काँही यस्तो गठिया, sciatica र herniated डिस्क प्रमुख रोगहरु सम्बन्धित। दुर्लभ अवस्थामा, यो एक संक्रमण वा ट्यूमर कारण हुन सक्छ। त्यहाँ यी रोगहरु को कुनै पनि को पनि slightest शङ्काको छ भने, यो सकेसम्म डाक्टर बारी गर्न आवश्यक छ।
"Nimesulide" पछाडि दुखाइ देखि लिइएको छ। गैर-steroidal, विरोधी-भडकाऊ र analgesic प्रभाव को यो समूहको ट्याब्लेटको। मात्र वयस्क स्वीकार र कडाई व्यक्तिगत विकास योजना अनुसार। कुनै कम प्रभावकारी चिकित्सा - "Movalis"। यस दबाइ संग उपचार prostaglandin संश्लेषण को निषेध गरिएको छ, अर्थात्, तिनीहरूले सुनिंनु को स्रोत हो।
यो पीठ चक्की पूर्ण रोग निको पार्न सक्छन् भने कि सम्झना हुनुपर्छ। गर्नुपर्छ चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्, एक व्यापक परीक्षा पास गर्न, र मात्र पछि उपचार को एक वैकल्पिक विधि चयन गर्न।
"Oflokain" (मलम): प्रयोग, analogs, फोटो लागि निर्देशन
"Grippol प्लस": समीक्षा। "Grippol प्लस" (फ्लू टीका): विवरण, मूल्य
Bronchodilators: लागूपदार्थ, आफ्नो प्रभाव र आवेदन को सूची। bronchodilators को वर्गीकरण
कम्पनी Evalar। समीक्षा
दबाइ "Revalgin"। प्रयोगको लागि निर्देशन, contraindications।
चिकित्सा 'otinum'। प्रयोगको लागि निर्देशन
मौसम को हिट: पुरुष साँचो छाला बनेको पर्स
Wasps लागि मास्टर जाल
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा सेन्ट व्लादिमीर गरेको गिरजाघर: इतिहास
जहाजहरु लोक उपचार कसरी सफा गर्ने? मानिसहरूको उपचार: समीक्षा
विभिन्न तरिकामा मनके बिरालो कसरी बनाउन
जहाँ रेल मा यात्रा किन्न र यात्रा खरीद कसरी पैसा बचत गर्न
फूल knifofiya: खुला क्षेत्र, खेती र प्रजनन मा रोपण र मर्मतका
फिलिपिन्समा राष्ट्रिय संगठन
Pupils लागि सार्वजनिक ठाउँमा मान्यता र आचरण को नियम
जूताका प्रकारहरू र उनीहरूको छोटो विवरण
लक्षण - मानिसहरू मा Chlamydia, उपचार खुराक। सरुवा यौनजन्य संक्रमण
मत्स्य पालन रहस्य: कैटफिशको लागि चारा